Banyere Anyị - Nanjing Jianke Machinery Co., Ltd
Nanjing Jianke Machinery Co., Ltd nke nta nke nta ghọọ otu n'ime n'elu enye nke igwe ngwá ọrụ ụlọ ọrụ na ụwa. Tọrọ ntọala na 1993, JIANKE na-elekwasị anya n'ichepụta Switzerland-ụdị akpaka lathe n'ihi na mmepụta nke obere, mgbagwoju na nkenke metal mmiri niile.
Ruo ugbu a, anyị nwere atọ ụdị Switzerland-ụdị akpaka lathe, Z usoro, M usoro na W usoro, nke nwere ike igbo mba mkpa si dị iche iche ubi: aerospace, agha, ọgwụ, na akpaaka akụkụ, etc.
All JIANKE igwe na-dabere na ọhụrụ technology na mmiri, dị ka spindle biarin, na-eduzi okporo ígwè na servo Motors bụ kpọmkwem site n'elu ma ama suppliers. Nkedo bed na mmiri na-machined site anyị onwe anyị factory iji hụ magburu onwe ya mma.
JIANKE esi ọnwụ na ihe mgbaru ọsọ nke "na-achụso magburu onwe ngwaahịa, na-eje ozi zuru ụwa ọnụ ahịa". Anyị injinia na-achọ ka mma igwe arụmọrụ, igwe nkenke na igwe nchekwa. Ngwa injinia na-raara onwe ha nye na-enyere ndị ahịa anyị na-ahụ ezigbo anya-na-na-adịghị adị ma ọ bụ omenala ahazi JIANKE CNC igwe ngwọta napụta kacha mmepụta arụmọrụ na-eri-ego.
Dabere na azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "àgwà mbụ, aha mbụ", JIANKE-agba mbọ ka enye pụrụ ịdabere na ngwaahịa, zuru okè ọrụ, ọkachamara ngwọta.